ဘယ်ဘက် ကလွန် တာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ဘယ်ဘက် ကလွန် တာလဲ
ဘယ်ဘက် ကလွန် တာလဲ
Posted by ဘဘ on Jan 9, 2011 in Celebrity, Gossip, Rumor, Myanma News, News | 28 comments
ဘယ်ဘက် ကလွန် တာလဲ။ ဝေဖန်ပေး ကြပါဦး။http://www.youtube.com/watch?v=dlJowRAOzcQ
အသံဖိုင် တွေကိုပြောတာ။ Photoတွေ ကိုမဟုတ်ပါ။ (Photo က အင်း ….. ကောင်းပါတယ်)
ကြည့်တဲ့လူဘက်က လွန်တာပါ ဟီး ဟီး။ ၀တ်တဲ့လူဘက်က ချိုးခြံချွေတာရေး သဘောပါ။
ဘယ်ဖက်က မှမလွန်ပါဘူး လှပါတယ်
သူတို့ဆိုလိုတာက… အဲဒီအသံဖိုင်မှာပါတာကို ပြောတာဗျ..။
၀ိုင်းဆုခိုင်သိန်းနဲ့.. ဟိန်းဝေယံနဲ့ ၂၀၀၈က ခိုးရာလိုက်ဖြစ်ကြတာကို… ဟိန်းဝေယံအဖေက .. ၀င်ပြောနေတဲ့အသံဖိုင်ပါ..။
အသံဖမ်းသူ..ဖြန့် သူက.. ၀ိုင်းဆုခိုင်သိန်းဖြစ်ဖို့များတယ်..။
အဲဒီအချိန်က .. ကောင်လေးက .. ၁၉နှစ်..။ ကောင်မလေးက .. ၂၂ နှစ်.။
မြန်မာပြည်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်… လွန်တာပေါ့နော..။ လွန်ကြတာပေါ့..။
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းဘက်က ဖြန့်တာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ မိန်းမဘက်က ဒါမျိုးသတင်းထွက်ရင် သွားပြီလေ နာမည်ဆိုးကြီး ကျန်ခဲ့မှာ ။ မိအေး နှစ်ခါနာ အဖြစ်မျိုးဖြစ်အောင်တော့ သူ့ဘက်က လုပ်မယ် မထင်ပါဘူး ။
ကြည့်ရတာ … သားရှင်ဘက်က ညှိပါလိမ့်မယ် မရတော့မှ မိန်းမဘက်က နစ်နာအောင် အသံဖိုင်တွေ ဖြန့်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ဝိုင်းစိန် မတော့ နာမည် ကြံဖန် ကြီးအုံးမယ်၊ မိုးဟေကို လောက် တော့ မဆိုးသေး ဘူးပေါ့။
ရိုက်တဲ့သူ ( သေချာမြင်ရအောင်မရိုက်ဘူး ညံ့လိုက်တာ ) ဟွင်း
post တင် တဲ. သူ လွန် ပါ တယ် ခင်း ဗျား…
ုကိုနီ http://www.vtunnel.com ကနေ youtube ကိုဝင်လို့ရတယ်ဗျ
24 yr ,female, doctor, mandalay, burma. says:
ကြည့်လို.မရပါ access denied ပါတဲ့ဗျို.
မဝေဖန်ချင်ပါဘူးဗျာ… သေချာ စဉ်းစားကြည့်ရင်၊ ၁၉နှစ်-၂၂ နှစ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်တွေ အရွယ်ပါ… လူငယ်တွေလဲ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ မှားဖူးကြမှာပါ… ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာလဲ လူငယ်တွေ ကြားမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်… သာမန်လူငယ်တွေ အတွက်ကတော့ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘဲ ပြီးသွားမယ့် ကိစ္စပါ… ဒါပေမယ့် သူတို့က သူတို့အတိုင်းအတာနဲ့ သူတို့ အောင်မြင်နေတဲ့ Celebrity တွေ ဖြစ်နေတော့ ဒီအသံဖိုင်ဟာ သူတို့ကို တစ်နည်း တစ်ဖုံ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ် ထင်တယ်ဗျာ… သတင်းတွေထဲမှာ ဆိုရင် Celebrity Gossip က တော်တော်လေးကို အရာရောက်ပါတယ်… Media တွေ လက်ထဲရောက်သွားရင်တော့ မလွယ်ဘူး… စိတ်မကောင်းစရာပါ… ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ပဲလေ…
ဝိုင်းစု ဘက်ကတော့ လွန်မလွန်မသိပင်မဲ့သူ့အတွက် အခုချိန်မှာဒါမျိုးသတင်းထွက်တော့ နာမည်ဆိုးကြီး တစ်ခုတော့ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့မှာတော့ ကျိန်းသေနေပြီ . ဟိန်းဝေယံတို့ ဘက်ကလည်း နည်းနည်းတင်စီးလွန်းတယ်လို့ ထင်တာပဲ .
ဟိန်းဝေယံ အဖေအသံကလဲ ယောင်္ကျားကြီးတန်မဲ့
သူ့ပြန်ပြောတဲ့ စကားသံတွေကြားရတာ တာဝန်မဲ့ လိုက်တာ။
သူ့မှာ သမီးတွေ၊ တူမတွေရောမရှိဘူးလား။
လွန်တာ တော့ ၂ဖက် လုံး ပါပဲ။ ယောက်ကျား ပဲ မိန်းမ ခိုးပြီး ရင်တော့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ယူရမှာပေါ့။ အဲ မိန်းကလေး ဘက်ကလဲ ”သမီး ကိုတခုခု ဖြေ ရှင်းပေး ဖို့လို့ ပြောခဲ့ တော့တမျိုး ဖြစ်နေတယ်”။ အမှန်က”သမီး ကို ယူရင်ယူ မယူရင် တရားစွဲ မယ်”ဆိုပြီးပြီပေါ့။ သိန်း၅၀၀ ပေးပြီး ကျေအေး လိုက်တယ် လို့ ကောလဟာလ(ကောလဟာလ) ကြားရပါတယ်။
နားထောင်နေရင်း ပြောနေတဲ့ကောင်ကို လည်ပင်းညှစ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် သိလား သူမို့မစာမနာ ……..
ကောင်မလေးကိုသနားပါတယ်..။ နီးစပ်သူတွေပြောလိုက်ကြပါလား ။လိုအပ်ရင် နေ၀န်းနီ အနစ်နာခံပေးပါ့မယ်လို့
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ဟိုလူကြီး က ဘဝင် ရူး ကြီး နေမယ်၊ ဒီလိုငယ်ငယ် ချောချော လေးနဲ့ များသဘော မတူ ဘူးလေးဘာလေးနဲ့။ ကျနော် ဆိုသနား တာနဲ့ပဲ
၀ိုင်းဆုဘ၀တော့နှစ်ခါနာဖြစ်တော့မယ် နေပါစေတော့ကိုနေရယ် ဒီအတိုင်းလေးပဲ
အသဲယားတယ်နော် နားထောင်လို့မရသေးလို့ Try again later တဲ့ ထပ်ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ် ပြီးမှပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ဝင်မန်းမယ်
ဒီlinkကိုနားထောင်လိုက်တော့ ၀ိုင်းစု တော်တော်အောက်သွားတယ်နော်။ အော်… ချစ်မိတော့ရှုံးတာဘဲ။